BestCities: Bogotá bịaranụ ịnabata 'Ike nke Ndị Mmadụ'
Home » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » BestCities: Bogotá bịaranụ ịnabata 'Ike nke Ndị Mmadụ'
Nwere ike 15, 2018
Mkpakọrịta sitere n'akụkụ ụwa dum ga-agbadata na Bogotá, Colombia, na Disemba a, maka otu izu nke ndị ọkà okwu na-akpali akpali, ebe a na-eche echiche na ịkparịta ụka n'allntanet gburugburu isiokwu nke Ike nke Ndị Mmadụ na Nzukọ Mba Nile nke BestCities kwa afọ. Na-agbasi mbọ ike inweta ogo 100% site na ndị nnọchi anya maka afọ nke atọ, mmemme maka 2018 Forum juputara na ọrụ ga-eme ka nka nke ndị isi otu.
E kpughere nkọwa nke ihe ị ga-atụ anya na Nzukọ nke afọ a n'ụtụtụ nri ụtụtụ nke mgbasa ozi nke BestCities kwadoro n'oge IMEX Frankfurt. Emere na mmekorita ya na Greater Bogotá Convention Bureau (GBCB), isiokwu afọ a ga-adabere na Ike Ndị Mmadụ. Inyere aka mee ka ndị mmadụ mee ọtụtụ ihe, Mgbasa ikike nke ndị mmadụ na-ekwu maka ikike ndị mmadụ ịgbanwe n'agbanyeghị agbanyeghị gburugburu ha.
N'otu oge ebe nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ oke okpukpe nwere ike ịmepụta ihe mgbochi maka ịkekọrịta ihe ọmụma na imekọ ihe ọnụ, ụlọ ọrụ ihe omume azụmaahịa enwebeghị ọrụ dị mkpa karịa. BestCities na-eleba anya na nke a site na ikpokọta obodo ndị mmekọ 12 sitere na gburugburu ụwa nke na-akwalite ọkwa kachasị elu maka nzukọ na ihe omume. Ọ na-agba ha ume ilekwasị anya karịa njem nleta na ịhapụ ihe nketa na-adịgide adịgide. Site na ijide nzukọ Global Forum kwa afọ, ọ na-esetịpụ ịkụziri ndị isi otu ndị isi na-ahụ maka mkpa isiokwu ndị a dị ma na-egosipụtakwa ebe iri na abụọ kachasị elu. Mmemme Ike Ndị Mmadụ ga-achọ ileba anya n'okwu ndị a, mepụta mkparịta ụka na-aga n'ihu ma kwalite ihe kpatara nzukọ mba ụwa.
Nzukọ nke afọ a ga - ahụ ọtụtụ ndị ọkà okwu gụnyere:
• Rick Antonson "ihe mberede Executive" na mbụ CEO nke Tourism Vancouver. N'ịga ụwa, dee akwụkwọ ise ma rụọ ọrụ ya na ụfọdụ n'ime ihe ndị a ma ama na Canada, Rick ga-eweta ụzọ ya na-esote ahụmịhe nke usoro ihe omume ahụ mgbe ọ na-atụle oge ya na Tourism Vancouver.
• Lina Tangarife, Director nke Ọrụ Social na Social Alliance nke Uniandinos. Onye ọkachamara n'ọchịchị nhazi nke ndị otu na-ahụ maka ndị ọrụ obodo, o jirila ike nke ndị mmadụ jiri ike ya rụọ ọrụ site na iwusi ndị ọrụ afọ ofufo ike n'ime ụlọ ọrụ, gọọmentị na ndị na-abụghị ndị gọọmentị.
• Neyder Culchac, Onye Ntorobịa Na-eto Eto. Site na mpaghara a na-akpọ Putumayo na ndịda ọdịda anyanwụ Columbia, Neyder tolitere na ọgba aghara mana o kpebisiri ike ịghara ikwe ka nke a gbochie ya ịme mgbanwe dị mma. Mepụta ụzọ gbanwere ndụ nke ezinụlọ 480 n'ime obodo ya, Neyder ga-ekerịta akụkọ ndụ ya ma kụziere ndị nnọchi anya ikike nke mkpebi.
N'ịlaghachi n'afọ nke abụọ, Sean Blair, onye nwe ProMeet, ga-akwado ọgbakọ nke afọ a. Emere na Agora Bogotá Convention Center, dị naanị kilomita abụọ site na etiti akụkọ ihe mere eme nke Bogotá, nzukọ ụbọchị anọ ahụ gụnyere ọtụtụ okwu, nzukọ mmekọrịta na mmemme mmemme iji mụta banyere mpaghara na ọdịbendị nke Latin America.
Dị ka afọ ndị gara aga, ndị nnọchi anya ga-aga nri abalị Onye nnọchi anya iji zute ndị ọgbọ, ndị nnọchi anya obodo na ndị isi kọntaktị na-enye ha ohere iwulite mmekọrịta ma bulie netwọkụ ha gafee ụwa. Nzukọ Café ama ama na mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya na mmadụ iri na abụọ nke ndị mmekọ BestCities bịara (Berlin, Bogotá, Cape Town, Copenhagen, Dubai, Edinburgh, Houston, Madrid, Melbourne, Singapore, Tokyo na Vancouver).
Paul Vallee, Onye isi nchịkwa nke BestCities Global Alliance kwuru, sị: “Site na mmemme agụmakwụkwọ dị oke egwu, nghọta na ntanetị, nke atọ nke BestCities Global Forum ga-enye ndị nnọchiteanya nghọta miri emi banyere nzukọ ọgbakọ na nzukọ ga-eme mgbanwe site na ndị mmadụ, na ohere iji mepụta ihe nketa na-adịgide adịgide. Ọ na-akpụzi ka ọ bụrụ ihe omume pụrụ iche na ọtụtụ ndị ọkà okwu, ụlọ ọrụ na ịkparịta ụka n'networkntanet.
“Anyị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ebe ndị mmadụ nọ n’ezie ihe niile anyị na-eme. Isiokwu nke Ike Ndị Mmadụ na mkpọsa ga-arụ ọrụ iji gosi ọtụtụ ndị na-akpali mmụọ na-arụ ọrụ iji meziwanye ụlọ ọrụ ahụ ma mepụta ihe nketa na-adịgide adịgide.
“Everyone is very excited to head to the Latin American capital for this year’s Global Forum. Bogotá is the only destination in Latin America in the Global Forum so it will be full of new cultural experiences for everyone to enjoy. The people make this city and so is the perfect destination to host this year’s theme. I would encourage all delegates who meet the criteria to register to attend before it’s too late.”
Jorge Mario Díaz nke Greater Bogotá Convention Bureau kwuru, sị: “A ga-apụ obodo ahụ dum ka ha nwee nzukọ Global Forum nke afọ a. Onye ọ bụla nọ na-akwadebe ma tinye ihe niile ha nwere ike ime iji mee ka Nzukọ ahụ ọ bụghị naanị echefu echefu na agụmakwụkwọ kamakwa iji gosipụta ike nke ndị mmadụ nke ndị otu Alliance.
Obi dị m ụtọ na m kpọbatara nzukọ a a ma ama na obodo anyị, na ike ịkọrọ ndị bịara nzukọ ahụ ọmarịcha ndị mmadụ na ọdịbendị nke Latin America.
Maka afọ mbụ, e kesara isiokwu nke Global Forum site na mgbasa ozi dijitalụ nke GBCB na-eduzi. Mgbasa ozi a bu inye inye ezi nghota na ihe putara na ikike nke ndi mmadu nwere n’ime ulo oru ndi nwere ike igbanwe. Ndị ọrụ ibe 12 nke BestCities Global Alliance egosila nkwado ha na mkpọsa a. ”
Maka afọ mbụ, e kesara isiokwu nke Global Forum site na mgbasa ozi dijitalụ nke GBCB duziri. Mgbasa ozi a bu inye inye ndi mmadu ike n’ime ulo oru ndi nwere ike igbanwe. Ndị mmekọ iri na abụọ nke BestCities Global Alliance gosipụtara nkwado ha na mkpọsa ahụ.
Ndebanye aha maka BestCities Global Forum Bogotá emeela ugbu a. Nwere ike ịga, yana ụgbọ elu njem, njem na nri maka ndị niile na-aga ụlọ ọrụ ruru eru nke mba ndị BestCities kpuchitere.
Na-ewere ihe okike na ihe ọhụrụ na ọkwa ọhụrụ na IMEX na Frankfurt
Nwanyị Cunard Queen Mary 2 na-amalite oge 2018 Transatlantic
Ndị ndu na-ejegharị ejegharị na United States na-agba White House ume ịmaliteghachi njem mba ụwa
Akụkọ Njem Nleta njem nleta
Ọrụ ịme njem na njem nlegharị anya site na 34.3% na Eprel 2021
Ndụmọdụ maka Travellọ Ọrụ Njem Settọ Isọ Ntọala Desk Software
Saint Vincent na Grenadines na-eme njem
MAP International gara n'ihu iziga ndị enyemaka nke ugwu mgbawa nke La Soufrière na St. Vincent